Gastronomy nke Philippines | Akụkọ Njem
Gastronomy nke Philippines
Maria José Roldan | | Philippines, Gastronomy, Asia njem
Gastronomy nke Philippines bu uzo nke usoro nri ndi ozo nke jikoro na ndi bi na Philippines, nri a na ndi mmadu noo na Southeast Asia na ndi Europe dika ndi Spain. Dị ka iwu n'ozuzu, Filipinz na-eri nri ugboro atọ n'ụbọchị: almusal (nri ụtụtụ), tanghalian (nri ehihie) na hapunan (nri abalị), gbakwunye nri ehihie a na-akpọ nri. Ọ bụ ezie na ha nwekwara ike iri ugboro isii n’ụbọchị.
Site na nke a, m na-ekwu na na Philippines nri na gastronomy ya niile metụtara ọ bụghị naanị na nri na ihe ọ pụtara, kamakwa akụkụ ya, ọdịbendị ya na omenala ya niile.
1 Mmetụta tupu oge ochie
2 Ọbịbịa nke ndị Spen
3 Mmetụta ndị China
4 Otoputa nke omenaala ndi ozo
5 Nri na Philippines
6 Okporo ụzọ nri
7 You ma ihe Pulutan bụ?
Mmetụta tupu oge ochie
Mmetụta mbụ na Philippines, tupu oge Hispanic, pụtara ìhè na ịkwadebe ụfọdụ nri site na isi nri na mmiri, uzuoku, ma ọ bụ anụ. A na-etinye usoro ndị a n'ọtụtụ nri dị iche iche sitere na carabao (buffalo mmiri), ehi, ọkụkọ na anụ ezi, na azụ azụ, azụ, mollusks, wdg. Ndị Malays kụrụ osikapa na Eshia site na 3200 BC. C. Rozọ azụmahịa tupu oge Hispaniki ka e mebere China na India ewebata iji toyo (soy sauce) na patis (azụ azụ) n'ime nri nri nke Philippine, yana usoro ọgbụgba na ịkwadebe ofe nke Eshia.
Ọbịbịa nke ndị Spen
Ọbịbịa nke ndị Spain mere ka a gbanwee ụfọdụ omenala nri, na-ewebata ose chili, ihendori tomato, ọka na usoro ịmịkọrọ galik a na-akpọ stew, nke a nwere ike ịchọta ugbu a akọwapụtara ya na nri Philippine.. A na-echekwa ụfọdụ nri na mmanya na ngwa nri taa ma bụrụ usoro nke ndị Spanish webatara na nri mpaghara..
Enwere mmegharị maka nri Spanish na nri Philippine ma ha ewu ewu, dịka paella, nke dị na nsụgharị Philippine bụ ụdị osikapa Valencian, nsụgharị mpaghara nke chorizo, escabeche na adobo.
Mmetụta ndị China
N'ime narị afọ nke iri na itoolu, nri ndị China malitere ịmalite mmetụta ya dị ka ebe a na-eme achịcha ma ọ bụ ụlọ ahịa noodle nke malitere ịmalite n'ókèala ahụ. Nke mere na mgbe ụfọdụ a na - agwakọta aha n'ụzọ dị otu a nwere arroz caldo (osikapa na ọkụkọ na ofe) na morisqueta tostada (okwu ochie maka sinangag ma ọ bụ osikapa eghere eghe).
Otoputa nke omenaala ndi ozo
Kemgbe mmalite nke narị afọ nke XNUMX, ọdịdị nke ọdịbendị ndị ọzọ wetara ụdị ndị ọzọ na ọ bụ ya mere, ugbu a, mmetụta nke nri nri America, French, Arabic, Italian and Japanese bụ nke pụtara ìhè, yana iwebata usoro nri ọhụrụ.
Nri na Philippines
Dịka ị nwere ike iche, ndị Filipinz hụrụ n'anya iri nri na ọ bụ ya mere ha nwere ike iri ugboro atọ ruo isii n'ụbọchị, na -eme opekata mpe nri 3 zuru oke na nri abụọ. Nri zuru ezu na-abụkarị nchikota osikapa (steamed ma ọ bụ eghe) ma ọ dịkarịa ala otu nri. A na-enyekarị osikapa eghe n’oge nri ụtụtụ.
Cookingzọ esi esi nri ndị kachasị mma na Philippines bụ adobo (sie na soy sauce, galik, na mmanya), sinigang (sie na tamarind base), nilaga (sie yabasị), ginataan (esi nri na mmiri oyibo), na pinaksiw (sie na ginger na mmanya), ha niile na-eji otu n'ime nri ndị a: anụ ezi, ọkụkọ, anụ, azụ na mgbe ụfọdụ akwụkwọ nri.
Mpaghara dị iche iche na Philippines nwere ọpụrụiche ha na nri nke onye ọ bụla bi na ya na-atọ ụtọ ma nwee mmasị igosi ndị njem nleta. A na-akwadebe nri ụtọ mpaghara ndị a n'oge ememme (nnukwu ememme iji sọpụrụ onye senti) ụfọdụ na-abụkwa isi iyi ego maka mpaghara ndị ọzọ na-ebupụ gaa mba ndị ọzọ.
Okporo ụzọ nri
Ọ bụrụ na ị gaa Philippines ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'okporo ámá na-ere mais (ọka na-atọ ụtọ), anụ ezi a hụrụ n'anya, ọkụkọ na plantain, chicharrón (anụ ezi ma ọ bụ ntị, anụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ahụ), bọọlụ skọid, azụ, squid, àkwá, ahụekere , Balut a ma ama (Embrayo a na-esi nri nke a na-ewere dị ka nri), àkwá siri ike, osikapa sandwiches… na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nri dị n'ụlọ ahịa dị n'okporo ámá dị ọnụ ala karịa na ịga n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, mana ịdị ọcha nri nwere ike ịhapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ, Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ahụ ike gị, ị ga-ahọrọ ịga ebe dị jụụ iji rie nri ndị a dị iche na nke ọhụrụ a.
You ma ihe Pulutan bụ?
Pulutan bụ nri a na-eri na a withụrụma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị nwere ike ịchọta na menu ụlọ oriri na ọ restaurantụ youụ ị nwere ike ịzụta iji rie mgbe ị na-a alcoholụ mmanya. Ihe kachasị ewu ewu bụ poteto eghere eghe na tomato ihendori, soseji, tobe't (soya na tofu e ghere eghe), kikiam, azụ, squid ma ọ bụ bọọlụ ọkụkọ, ọkụkọ eghere eghe, ọkụkọ calamari e ghere eghe na ọtụtụ nri ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-aga Philippines ị kwesịrị ịma na gastronomy ahụ dị iche na ihe ị na-ejibu na mba gị, mana na iji uche ghere oghe ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ na ọbụna ikwugharị. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịchọta n'ime nri gastronomy ya nke ndị njem nleta na-ahọrọ, nri mmiri, nri ndị anaghị eri anụ, ọtụtụ mkpụrụ osisi na nri ị nwere ike ịchọta na nnukwu ụlọ ahịa.
Ihe dị mkpa mgbe ị gara Philippines bụ na ị maara ebe ị ga-eri nri, cheta na ịdị ọcha na ụlọ ahịa n'okporo ámá adịghị mma na ị nwere ike ijide ọrịa eriri afọ. Ọ bara uru ịkwụ ntakịrị karịa na iri ezigbo nri dị mma. Ọ bụrụ na ịnọ na họtel, ana m enye gị ndụmọdụ tupu ị gawa iri nri abalị ma ọ bụ nri ehihie n'obodo, jụọ onye na-elekọta ụlọ oriri na ọ forụ hotelụ maka ndụmọdụ maka ebe ndị ama ama ka ha rie ma ọ bụ rie nakwa na ndị njem nleta enweela afọ ojuju. Agala n’onwe gị n’amaghị ebe ndị ahụ ebe ọ bụ na ebe niile, ọ bụrụ n ’ịchọrọ iri maka ọnụ ahịa ego, ị kwesịrị ịma ebe ị na - aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Gastronomy nke Philippines
Kedu ihe ị kwesịrị iweta ma ọ bụrụ na ị ga-ama ụlọikwuu
Ihe 7 n'efu ka ị hụ na Seville